Hoteelada leh tamarta qoraxda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Adrian | | Kaydinta tamarta, Tamarta Qoraxda Photovoltaic
Warshadaha hudheelku waa qayb dhaqaale oo muhiim ah maaddaama oo ay adduunka ka jiraan kumanaan hudheello oo noocyo kala duwan leh. Hawlahaani wax badan ayey ku baxaan korontada iyo tamarta adeegyada ay siiyaan dadka soo booqda awgood.
Laakiin maanta isbeddelku waa badbaadi tamarta iyo in ay ahaato mid deegaan ahaaneed taas oo huteelo dhowr ah oo adduunka ka mid ah ay dib u naqshadeynayaan dhismayaashooda, kuleylinta iyo nidaamyada qaboojinta iyo falalka kale si looga dhigo kuwo ku habboon deegaanka.
Laba tusaale oo lagu xisaabtami karo ayaa ah: Huteelka Crowne Plaza ee ku yaal Danmark waxa lagu dhex daray balal qoraxda ku shaqeeya oo bixiya qayb badan oo tamartiisa ah. Waxa intaa dheer in a design iyo tikniyoolajiyad waarta tamar ka dhigaysa dhismaha mid waxtar badan, u oggolaanaya in si fiican loo isticmaalo tamarta.
Hoteelkani wuxuu keydiyaa qiyaastii 50% waxa aasaas la mid ah uu cuno iyo nidaamyada tamarta caadiga ah.
Kiis kale oo aad u muhiim ah ayaa ah kan hoteelka raaxada leh ee Power Valley Jingjiang International ee Shiinaha. Hoteelkan oo ah shan xiddig ayaa leh 291 qol iyo dhowr xarumood oo dheeri ah sida makhaayado iyo qolal dhacdo.
Hoteelkani wuxuu soo saaraa 10% tamarta uu ku isticmaalo tamarta qorraxda laga bilaabo 3800 modulladaha sawir qaadista. Muuqaal kale oo xusid mudan ayaa ah inay leedahay nidaam dib loogu warshadeeyo tamarta kuleylka ah biyaha qashinka loona beddelo kuleyl, qaboojin iyo biyo kulul.
Huteeladuhu waxay ogaanayaan faa'iidooyinka tamarta qorraxda iyo naqshad deegaanka iyo tamarta waarta si loo keydiyo tamarta iyo lacag badan.
Sidoo kale waa waddo lagu daboolayo baahida sii kordheysa ee macaamiisha kuwaas oo ka dalbanaya shirkadaha inay si wanaagsan u maareeyaan deegaanka.
Hubaal hudheelo badan oo adduunka ka mid ah ayaa ku dayan doona ficiladan maaddaama ay aad ugu fiican yihiin dhinacyada oo dhan.
Keydso tamarta iyo wax soo saar tamarta la cusboonaysiin karo Waa ballan qaad dhammaan, laakiin shirkadaha waaweyn iyo shirkadaha waxaa saaran waajib weyn maadaama ay iyagu yihiin kuwa inta badan cuna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Hoteelada leh tamarta qoraxda